नारायणहिटी दरबारको बङ्करभित्रसमेत बतासको व्यापार ! - Halesi Khabar
नारायणहिटी दरबारको बङ्करभित्रसमेत बतासको व्यापार !
२६ पुष २०७८, सोमबार १८:२२ ।
काठमाडौँ, २६ पुस । विवादित व्यापारिक समूह बतासले नारायणहिटी दरबार सङ्ग्राहलयभित्र रहेको ऐतिहासिक सुरुङ (बङ्कर)भित्रसमेत व्यापार गर्ने योजना बनाएको खुलासा भएको छ । सोमबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सँस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री प्रेम आलेले यसबारे खुलासा गर्नुभएको हो ।
आलेकै सक्रियतामा बतास समूहले व्यापारका लागि बनाइरहेको संरचना हाललाई रोकिएको छ । “सङग्राहलयभित्र धेरै पुरानो एउटा सुरुङ (बङकर)समेत रहेछ । त्यो बङ्करलाई सहित तोडमोड गरेर के–के गर्ने काम पनि त्यहाँको सञ्चालकले गर्नुभएको रहेछ । यस्तो पुरातात्त्विक महत्वको बंकरहरु हामीले यसरी भत्काउँदै लग्यौँ भने भोलि इतिहासिमा मात्रै सीमित हुन्छ । हामीले देख्न पाउँदैनौँ”, उहाँले भन्नुभयो।
पत्रकार सम्मेलनमा सङ्ग्रहालयभित्र क्याफे सञ्चालनका लागि अघिल्लो सरकारको पालामा नै अनुमति दिइएको खुलेको मन्त्री आलेले बताउनुभयो । देशभक्त नेपालीहरुले यसबारे आफूलाई ध्यानाकर्षण गराएपछि आफूले एक्सन लिएको आलेले बताउनुभयो ।
अनुमति दिइएको भन्दा पनि बढी क्षेत्रफल ओगटेर बतास समूहले भौतिक संरचना निर्माण गरेको पाइएको पनि आलेले बताउनुभयो । यसबारे आफूले सुक्ष्म अध्ययन गर्दै जाँदा १४ रोपनी क्षेत्रफलमा पक्की संरचना निर्माण गरेको पाइएको बताउनुभयो ।
“१४ रोपनी क्षेत्रफलमा भौतिक संरचना निर्माण गरेर के गर्न खोज्नु भएको रहेछ उहाँहरुले ?”, उहाँले भन्नुभयो, ‘तर, यसको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी पाउनु भएका विकास समितिका कार्यकारी निर्देशकले समेत निगरानी गर्न सक्नुभएन ।”
सङ्ग्रहालय र देशको सम्पत्ति संरक्षण गर्ने आफ्नो कर्तव्य भएकाले यसलाई आफूले गम्भीरतापूर्वक लिएको बताउनुभयो । छिट्टै प्रतिवेदनको आधारमा छानविन र कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्ने पनि उहाँले बताउनुभयो ।